झाडापखालाको प्रकोप - News @ NepalUpclose.com
डोटीका गाउँ मानवशून्य बन्दै
हैजाको प्रकोप फैलिएपछि डोटीका गाउँ सुनसान बन्न थालेका छन् । हैजाका कारण ज्यान जाने त्रासले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा लेकका खर्क र भारततिर जान थालेपछि ग्रामिण क्षेत्र मानवशून्यको स्थितिमा पुगेको हो । अहिले प्रायः घरको मुलढोकामा ताल्चा लगाइएको भेटिन्छ भने गाउँमा हिँड्ठुल गर्न नसक्ने बुढाबुढी मात्रै रहेको खबर अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले छापेको छ ।
डोटीमा झाडापखालाको प्रकोप बढ्दो
१ साउन, डोटी । डोटीमा फैलिएको झाडापखालाबाट ज्यान गुमाउनेहरुको संख्या १३ पुगेको छ । जेठ अन्तिमसातादेखि फैलिएको झाडापखाला नियन्त्रणमा आउन नसक्दा मृत्यु हुनेको संख्या बढी रहेको छ । झाडा पखालाकै कारण शनिबार खातीवडा गाबिसमा... ...
झाडापखाला नियन्त्रण भएन
डोटी, श्रावण २१ - जिल्लामा महामारीको रूप लिइरहेको झाडापखाला अनियन्त्रित बन्दै गएको छ । गत शनिबारयता मात्रै ६ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । गर्भका शिशुदेखि ७५ वर्षका वृद्धवृद्धाको समेत समयमै उचित उपचार नपाएर मृत्यु भएको छ । शनिबारमात्रै झाडापखालाबाट गगुडा ५ का ७ वर्षीय वीरेन्द्र चन्दको मृत्यु भएको छ । ...
डोटीमा झाडापखालाबाट मर्नेको संख्या १२, सयौँ बिरामी
Aug 04, 2012.
पुष्पराज जोशी, डोटी, साउन २०‍- आज बिहान ९ बजे गगुडा गाविस ५ तल्ला गाउँका ८ वर्षीय वीरेन्द्र चन्दको मृत्यु भएपछि डोटीमा पखालाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या १२ पुगेको छ। गाउँमा उपचार नपाएपछि उनको मृत्यु भएको स्थानिय कर्ण चन्दले बताए। ...
डोटी, श्रावण १९ - झाडापखालाका कारण बिहीबार ७० वर्षीय एक वृद्धको मृत्यु भएको छ । जिल्ला स्वास्थ्य अधिकृत तेजविक्रम शाहीका अनुसार रानागाउँ ६ का सलुवा भूलको मृत्यु भएको हो । उनकी श्रीमती पनि थला परेकी छन् । डोटीमा झाडापखालाबाट मृत्यु भएकाको संख्या १० पुगेको छ ।
त्यस्तै बागलुङ संवाददाताका अनुसार लगात ...
गोरखाको प्रोकमा झाडापखालाबाट आठ जनाको मृत्यु
१८ साउन, गोरखा । जिल्लाको दुर्गम प्रोक गाउँ विकास समितिमा एक महिनाभित्र झाडापखालाका कारण आठ जनाको मृत्यु भएको छ ।
आठ जनाको ज्यान जाँदासम्म पनि स्थानीयवासीले स्वास्थ्य संस्थामा खबर नगरेका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बढ्ने... ...
झाडापखालाले सातको मृत्यु
गोरखा, श्रावण १८ - प्रोक गाविसमा दुई सातादेखि फैलिएको झाडापखलाले सात जनाको मृत्यु भएको छ ।
सात नम्बर वडाको क्वाक गाउँकी ६० वर्षकी चन्डी लामाको बुधबार र ५७ वर्षीया फुर्प लामाको बिहीबार मृत्यु भएको हो । अन्य पाँचको नाम खुल्न सकेको छैन । गाविसको क्वाक गाउँमा ३ जना र छाक गाउँमा चार जनाको झडापखालले मृत् ...
झाडापखालाबाट १ को मृत्यु
डोटी, श्रावण १८ - जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका सिनियर अहेव अधिकृत तेज विक्रम शाहीका अनुसार रानागाउँ वडा नं‌‌ ६ का सलुवा भूलको झाडापखालाबाट मृत्यु भएको छ । सलुवा की श्रीमती पनि झाडापखालाबाट थला परेकी छिन् । उनको बिहीबारबाट रानागाउँ स्वास्थ्य चौकीमा उपचार भइरहेको छ । यो सहित डोटीमा झाडापखालाब ...
झाडापखलाबाट डोटी र गोर्खामा गरी १२ जनाको मृत्यु
बिमल बिष्ट/भीमलाल श्रेष्ठ । डोटी/गोर्खां, साउन १८ । झाडापखालाको प्रकोपबाट पछिल्लो समय डोटी र गोर्खामा गरी १२ जनाको मृत्यु भएको छ । डोटी सहकर्मीका अनुसार करिब तीन महिना यतादेखी डोटीका ग्रामिण क्षेत्र तथा सदरमुकामका बिभिन्न ठाउँहरुमा फैलिएको झाडा पखालाबाट मर्नेको संख्या १० पुगेको छ । रोग नियन्त्रणमा आउन नसक्दा बिरामीमा धमा धम हैजाका लक्षण समेत देखा ...
झाडाबाट डोटीमा मर्नेको संख्या १० पुग्यो
बिमल बिष्ट । डोटी, साउन १८ । करिब तीन महिना यतादेखी डोटीका ग्रामिण क्षेत्र तथा सदरमुकामका बिभिन्न ठाउँहरुमा फैलिएको झाडा पखाला अझै नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । बिरामीमा धमा धम हैजाका लक्षण देखापर्न थालेका छन् । पछिल्लो समय यो रोगबाट मर्नेको संख्या दश पुगेको छ ।
प्रभाबित ठाउँहरुमा केन्द्रीय स्वास्थ्यकर्मी तथा नेपाली सेनाको भैरबगण सिलगढीको मेडिकल टोल ...
झाडापखालको प्रकोपबाट डोटीमा ८ जनाको मृत्यु
१५ साउन, डोटी । डोटीमा फैलिएको झाडापखालाका कारण आठ जनाको मृत्यु भएको छ । गत जेठ अन्तिम साता देखि फैलिएको झाडापखाला नियन्त्रणमा आउन नसक्दा उनीहरुको मृत्यु भएको हो ।
काँडामाण्डौ र बगलेक बाट फैलीएको झाडापखालाले... ...
काठमाडौं, श्रावण १५ - स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हाल मुलुकमा झाडापखाला/हैजा नियन्त्रणमा रहेको जनाएको छ । हालसम्म डोटी जिल्लामा हैजा/झाडापखालाले सात जनाको मृत्यु भइसकेको छ । मुलुकमा बझाङ र डोटीमा हैजा, झाडापखालाको प्रकोप देखिए पनि हाल पूर्ण नियन्त्रणमा रहेको दाबी मन्त्रालयको इपिडिमियोलजी तथ ...
झाडापखाला नियन्त्रणमा लिन निगरानी सुरु
१२ साउन, काठमाण्डौं । झाडापखाला नियन्त्रण गर्न र फैलिन नदिन ईपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले निगरानी थालेको छ । पछिल्लो समयमा झाडापखालाको प्रकोप फैलीएको डोटी र बझाङमा महाशाखाको टोली निगरानी गरेर र्फकेको छ ।
झाडापखालाबाट एक सय ५३ बिरामी
कैलाली : बझाङको विकट रिलु गाविस वडा नम्बर ५, ६, ७ र ८ मा फैलिएको झाडापखालाले प्रकोपको रूप लिएको छ । एक सातादेखि देखा परेको झाडापखालाबाट एक सय ५३ बिरामी परेका छन् ।
झाडापखालाबाट प्रभावित हुनेमा अधिकांश महिला र बालबालिका छन् । रिलु उपस्वास्थ्यचौकीमा उपचारका लागि ठाउँ अभाव भएकाले विद्यालयमा राखेर उपचार गरिएको इन्चार्ज गणेश कुँवरले बताए । कुँवरका अनुसा ...
जाजरकोटमा झाडापखालाको प्रकोप, एक वृद्धको मृत्यु
सुर्खेत (खजुरा), साउन १० - झाडापखालाको जोखिममा रहेको जाजरकोटमा यस वर्ष पनि यसको प्रकोप देखिन थालेको छ। झाडापखालाबाट सदरमुकाम खलङ्गा-६ रिसाङमा मङ्गलबार ७३ वर्षीय डिलाराम खड्काको मृत्यु भएको छ। ...
मुगुमा झाडापखालाको प्रकोप
जुम्ला, ९ साउन । मुगु जिल्लाको पुलु गाविसमा झाडापखालाको प्रकोप बढ्दै जाँदा १ र २ वडाका स्थानीय प्रभावित भएका छन् ।
झाडापखाला, आउँमासीबाट १ देखि पाँच वर्षसम्मका करिव ३० बालबालिका र २० वृद्ध अवस्था चिन्ताजनक रहेको मुगु जिल्ला जनस्वास्थ्य अधिकृत वृषबहादुर शाहीले जानकारी दिए ।
झाडापखाला अन्य क्षेत्रमा फैलिन नदिन र बिरामीको यथाशीघ्र उपचार गर्न औषधि तथा ...
डोटीमा हैजाको प्रकोप
बिमल बिष्ट । डोटी, साउन ८ । करिब एक महिना अघिदेखी डोटीका ग्रामिण क्षेत्र तथा सदरमुकामका बिभिन्न ठाउँहरुमा फैलिएको झाडा पखाला नियन्त्रणमा आउन नसक्दा अहिले बिरामीमा हैजाको लक्षण देखा पर्न थालेको छ । अधिकांस झाडा पखाला भएका बिरामीमा हैजाका लक्षण देखीन थालेको छ । पछिल्लो समय डोटीमा गर्भवति महिलामा बढी झाडा पखाला देखिन थालेको छ । डोटीको तिखात्तर गाबिस ...
बझाङमा झाडापखाला फैलियो
बझाङ, श्रावण ८ - बझाङको रिलु गाविसमा एक सातादेखि झाडापखाला फैलिएको छ । रिलु ८ थला गाउँसँगै उक्त गाविसका ५ र ६ नम्बर वडामा झाडापखालाबाट २४ भन्दा बढी थला परेका छन् । झाडापखालाका कारण बिरामी परेकाहरूमध्ये १० जनाको अवस्था गम्भीर रहेको स्थानीय केशव बोहराले बताए । उनका अनुसार अन्य पखालाका बिरामीहरूको अवस्था साम ...
काठमाडौ, श्रावण ६ - केही महिनायता जन्डिस, झाडापखाला जस्ता पानीजन्य रोगको मार झेल्दै गरेका नेपालीले अब 'हैजा' को थप संक्रमणबाट जोगिनुपर्ने छ । डोटीमा हैजा र झाडापखालाले सात जनाको मृत्यु भइसकेको छ । झाडापखालाको उपचार गराउन राजधानीको शुक्रराज ट्रोपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल पुगेकाहरूमध्ये तीन जनामा हैजाको जीव ...
४ साउन, नुवाकोट । नुवाकोट जिल्लाको शिखरबेशी गाविसमा फैलीएको झाडापखाला नियन्त्रणमा आएको छ । बुधबार बिहानबाट वडा नम्बर ४, ८ र ९ मा फैलीएको झाडापखालाले १ सय ६ जना सिकिस्त भएका थिए । गाँउलेहरुको... ...
झाडापखालाबाट सय भन्दा बढी विरामी
३ साउन, नुवाकोट । नुवाकोट जिल्लाको शिखरवेशीकम फैलिएको झाड पखालाले तीनवटा भन्दा बढी वडामा प्रभाव पारेको छ । झाडापाखालले महामारीको रुप लिएको स्थानीयले बताएका छन् ।... ...
डोटीमा झाडापखालाले थप दुईको मृत्यु
कैलाली, २ साउन । डोटीमा गत जेठ महिनाको अन्तिम साता देखि फैलिएको झाडापखाला अझै नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन ।
झाडापखालाका कारण मंगलबार थप दुई जनाको मृत्यु भएको छ । झाडापखाला भएपछि उपचारका लागि अस्पताल लैजांदै गर्दा काडामाण्डौं गाविस ३ का ७० वर्षीया बृद्धा शारदा साउँद र सानागाउँ गाविस २ वर्षीय बालक सुरेश भुलको बाटोमै मृत्यु भएको हो ।
जिल्लामा छिटपुट रु ...
झाडापखालाका बिरामीमा हैजा भएको पुष्टी
डोटी, श्रावण १ - जेठको अन्तिम साताबाट डोटीको बगलेख गाविसमा फैलिएको झाडापखालाका बिरामीमा हैजाका जीवाणु रहेको पुष्टि भएको छ ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय डोटी र सेन्टर फर मनीकुलर डाइनामिक्स काठमाडौंले पठाएको झाडापखलाका बिरामीहरूको दिसा र उनीहरूले प्रयोग गरिरहेको पानी परीक्षण गरी राष्ट्रिय महामारी तथा रोग निय ...
झाडापखालाले मृत्यु हुने ५ पुगे
डोटी, असार २६ - झाडापखालाबाट दिपायल, सिलगढी नगरपालिका ६, बजगाउँकी एक युवतीको मृत्यु भएको छ । १८ वर्षीया लक्ष्मी भण्डारीको आइतबार झाडापखालाबाट मृत्यु भएको सुजुङ अस्पतालका डा. श्रीराम तिवारीले बताएका छन् ।
तिवारीका अनुसार २० गतेदेखि सुजुङ अस्पतालमा उपचार भइरहेको थियो । आइतबार बेलुकी भण्डारीको अवस्था गम्भीर भएपछि ...
झाडापखालाले युवतीको मृत्यु
डोटी, असार २५ - आइतबार राति डोटीको दीपायल सिलगढी नगरपालिका बजगाउँकी एक युवतीको झाडापखालाबाट मृत्यु भएको छ । १८ बर्षीया लक्ष्मी भण्डारीको उपचारका लागि नेपालगञ्ज लैजाँदै गर्दा मृत्यु भएको हो । भण्डारीको असार २० गतेबाट डोटीको राजपुरमा रहेको सुजुंग अस्पतालमा उपचार भइरहेको थियो । अवस्था गंम्भीर भएपछि थप उपचारक ...
झाडापखालाबाट डोटीमा फेरि एकको मृत्यू
पुष्पराज जोशी, डोटी, असार २५ - झाडापाखालाबाट डोटीमा सोमबार विहान फेरि एक बालिकाको मृत्यु भएको छ। दिपायल सिलगढी नगरपालिका वडा नं. ६ बजगाउँकी १६ वर्षीया लक्ष्मी भण्डारीको पखालाका कारण मृत्यु भएको हो। ...
झाडापखालाबाट २ को मृत्यु
दैलेख, असार ५ - झाडापखाला लागेर दुई जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा वडलम्जी-६ की सुभकला सुनार र चामुण्डा-४ की रुपा थारु रहेका छन् । लगातार आधा घण्टासम्म वान्ता चलेपछि ५१ वर्षीय सुभकलाको घरमै र २२ वर्षीय रुपाको दुल्लु स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला अस्पतालले जनाएको छ ।
रुपा सोमबार बिहानै ...
८२ सशस्त्र प्रहरी झाडापखालाबाट विरामी
कैलाली, ५ असार । अछाम जिल्लाको साँफेबगरमा रहेको सशस्त्र प्रहरी बल खप्तड गुल्ममा झाडापखालाको महामारी फैलिए पछि ८२ जना बिरामी परेका छन् ।
जवानहरुमा झाडापखाला महामारीका रुपमा फैलिएको गुल्मका प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक बेनुप्रसाद पाठकले बताए ।
आइतबार बेलुकी खाना खाई सुतेका जवानमा एक्कासी मध्यराति १२ बजे झाडापखालाको लक्ष्यण देखापरेको पाठकले जनाएका छन् ...
पुष्पराज जोशी, डोटी, असार ४- झाडापखालाबाट डोटीमा एक साता यता ७ जनाको मृत्यु भएको छ। डोटीको पूर्वी चौकीस्थित काडामाण्डौ-४ वटालागाउँमा झाडापखालाबाट ६ जना र वग्लेक गाविसमा १ जना गरी साता दिनमा ७ जना वृद्धवृद्धाको मृत्यु भएको हो। ...
चरक्क कपाल दुखाउने गर्मी अनि छिनमै बादल धुम्मिएर वर्षात्का सहस्रधारा । यस्तो मौसम लगभग सुरु भइसकेको छ । बादल र घामको यस्तो लुकाछिपीले मानवस्वास्थ्यलाई बर्सेनि जोखिममा धकेलिरहेको हुन्छ । ‘वर्षात्को सुरुआतसँगै यसपालि पनि दुर्गमका जनता झाडापखालाबाट पीडित हुने सम्भावना बढेको छ,’ स्वास्थ्यसेवा विभागअन्तर्गतको इपिडिमियोलोजी तथा रोगनियन्त्रण महाशाखाका प्र ...
झाडापखाला नियन्त्रण नभएपछि विद्यालय समेत बन्द
सुर्खेत, १ जेठ-सुर्खेतको पश्चिम सालकोट, पलैँटेमा पैmलिएको झाडापखाला नियन्त्रणमा नआएपछि सूर्यप्रकाश उच्च माध्यमिक विद्यालय दुई दिनको लागि बन्द गरिएको छ । झाडापखाला विद्यार्थी र शिक्षकमा समेत फैलन थालेपछि मंगलबार र ...
झाडापखालाबाट एकको मृत्यु २० भन्दा बढी बिरामी
मन्थली, वैशाख १७ - रामेछापको गुप्तेश्वर गाविस ३ को भिरकुनामा फैलिएको झाडापखालाबाट एक जनाको ज्यान गएको छ । दुई दिन देखि फैलिएको उक्त रोगबाट थप २० भन्दा बढी विरामी परेका छन् । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रामेछापका प्रमुख डा. बाशुदेव पाण्डेका अनुसार स्थानीय एक किसानको घरमा पालेको भैसीलाई खुवाइएको विषालु बुलु ...
बारामा झाडापखालाको प्रकोप
(बारा), दूषित पानी प्रयोगका कारण बाराको भरतगन्ज सिगौल गाविसमा झाडापखालाको प्रकोप देखा परेको छ। जंगलमा लागेको डढेलोको खरानी मिसिएर प्रदूषित बनेको मूलको पानी प्रयोग गरेपछि गाउँमा झाडापखालाको प्रकोप देखा परेको हो।
प्रकोपबाट गाविसको वडा नं. ८ र ९ मा मात्र करिब २ सयभन्दा बढी सर्वसाधारण बिरामी परेको उपस्वास्थ चौकीका इन्चार्ज मणिश्वर घिमिरेले बताए। 'डढेल ...
झाडापखालाबाट गाउँले प्रभावित
महेश्वर चामलिङ राई, उदयपुर, चैत ६- खोटाङको च्यास्मीटार गाविसमा झाडापखाला प्रकोप फैलिएको छ। सातादिनयता त्यहाँका दर्जन बढी बालबालिकामा फैलिएको झाडापखालाले गाउँले त्रसित भएका छन्। ...
रियल जुस पिएपछि कलाकारलाई झाडापखाला
डाबर नेपालको रियल जुस पिएर २२ जना राष्ट्रिय स्तरका कलाकार एकैचोटी बिरामी परेका छन् । पर्साको विकट गाउँ ठोरीमा आयोजित ठोरी सांस्कृतिक महोत्सवमा सहभागि कलाकारले शनिबार कार्यक्रमकै बिचमा प्यास मेटाउन रियल जुस पिएपछि झाडापखालाले ग्रस्त भएका हुन् ।
कलाकारलाई कार्यक्रम अवधिमा प्यास लाग्दा भनेर आयोजकले १० कार्टुन रियल जुस विरगंजबाट ल्याएका थिए । ती मध्ये ...
दार्चुला सदरमुकाम बग्न थाल्यो, अझै जोखिम हटेन (फोटो फिचरसहित) त्रिशूलीमा 'भुमरीले तान्छ'
नेपाल बन्दको देशभर प्रभाव
उपत्यकाकै १० निजी विद्यालयको एसएलसी नतिजा शून्य
कोइरालालाई डेरा सार्न तानातान
मदिरा नियन्त्रण तथा दुर्घटना न्युनिकरण अभियान
गोविन्द मैनाली जेलमुक्त,निर्दोष साबित,जापान सरकारले माफी माग्यो फास्ट ट्रयाक निर्माण कार्य नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामा बेलायतमा पक्राउ हनुमानढोकामा खारखाजनाको बक्स